I-Offshore Banking ne-Company Formation, Amasheya, Izinhlelo Zokuvikela Impahla
Isungula ama-Offshore Corporations, LLC, ama-Trasti nama-Akhawunti Ebhange.
· Abameli Abasebenzi · Kusukela ngo-1906
Ama-100's wezigidi zamaDola Avikelwe
Izinqumo eziphezulu ze-Offshore
I-akhawunti ye-Offshore: kanjani futhi ngani
Ukuvikelwa kwefa le-Bulletproof
Kungani Khetha i-OffshoreCompany.com?
Umhlinzeki omkhulu osemhlabeni jikelele
Abameli bangaphakathi kwabasebenzi
Kulula ukuqonda amavidiyo
Izinkampani nama-akhawunti ashesha kakhulu aselwandle
Ubuqotho, ukwethembeka, ukwethembeka
Amanani amaningi okuncintisana emhlabeni jikelele
24 / 7 umuntu ophilayo
Ukubonisana kwamavisi wamahhala ase-offshore
Ithimba lenkonzo yamakhasimende lesikhathi esigcwele
Uqala ama-Offshore Corporations,
Ama-LLC, ama-Trust, nama-Akhawunti aseBhange.
Imithetho eyimfihlo kunazo zonke nemithetho yebhange yase-offshore ivumela ubumfihlo bezimali kanye nokuvikelwa kwempahla kusukela ekuhlukaniseni, ababolekisi, izahlulelo kanye nezigwegwe.
I-Offshore Inkampani Yokubhalisa
Ukusungula inkampani ye-offshore kanye / noma ukuhambisa isakhiwo sakho senkampani emandleni angaphandle kwamanye amazwe kungaba isinyathelo esibalulekile ekuvikeleni izimpahla zakho ezinkantolo zomthetho, Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukusizakala ngamakhefu okukhokha intela emhlabeni jikelele futhi ukhulise izimali zakho ezikude kwamanye amazwe. Lewebhusayithi isekelwe eminyakeni yokucwaninga futhi ihloswe njengesifundo esingakuqondisa isinyathelo ngesinyathelo ekwenzeni nasekusebenziseni "inkampani yasenyakatho." Uzothola izinzuzo eziningi ngokoqobo ukusetha inhlangano yamazwe ngamazwe nokuqhuba ibhizinisi lakho usebenzisa i-akhawunti yasebhange ye-offshore esikhundleni, noma ngokubambisana ne-akhawunti yendawo. Nevis, Islands Cayman, Panama, BVI naseHong Kong, isibonelo, zonke iziphathimandla ezidumile kakhulu. Ngakho-ke, singakuqondisa ekumiseni i-corporation noma i-LLC oyithandayo. Khona-ke, singakusiza ukuthi uhlele i-akhawunti yasebhange ebhizinisini lakho bese usetha ihhovisi elikuyo elwandle.
Umthetho we-Nevis LLC unikeza ezinye izici zokuvikelwa kwempahla eziyingqayizivele futhi eziphumelelayo ukuvikela ama-akhawunti asebhange angaphandle asezinkantolo.
Shayela ukubonisana kwamahhala
Thumela Amadokhumenti Akho
Inkampani ne-Akhawunti Yasebhange Kuvulwe
Izinzuzo Zentela zase-Offshore
Ukuze kucacise, ukwenza ibhizinisi elingaphandle kwezwe akukona ukuchitha intela noma ukugcina imali kuhulumeni. Kunalokho, kungcono ukuhlela izindaba zakho ngendlela yokusebenzisa ngokunemithetho imithetho yasekhaya nasemhlabeni jikelele. Le mithetho etholakala kunoma ubani okhathalelayo ukuyisebenzisa ukuze kuzuze. Ngakho-ke, singakubonisa izindlela ezisemthethweni nezomthetho zokusetha ibhizinisi lakho emhlabeni jikelele ukuze uqonde izinzuzo ezikude ezivela ekuvikelweni kwempahla ekukhokheni izindleko.
Abantu base-US, UK, Australia kanye namanye amazwe, ngokubanzi, akhokhiswa intela emhlabeni wonke engenayo. Ngakolunye uhlangothi, cishe uyazi ukuthi i-Apple, i-Google nabanye baye bahlehlisa izindleko zabo zentela besebenzisa amasu angokomthetho ngokuphelele ngokusebenzisa izakhiwo zangaphandle. Ngaphezu kwalokho, inkampani yomshuwalense we-offshore ethatha enye indlela indlela amaklayenti ethu ayenqabela ngayo ngokomthetho izikweletu zabo ngaphansi kwe-IRC 953 (d) ne-831 (b). Ngakho-ke, kunezindlela ongase ukwazi ukwenza ngazo futhi, ngosizo lwethu kanye nesiqondiso sabaqeqeshi abanelayisensi efanele.
Asikwazi ukugcizelela iphuzu lokugcina ngokwanele. Izinzuzo zentela ye-Offshore yizindawo ezibucayi kakhulu zomthetho. Ngakho-ke, ngaphambi kokusebenzisa amasu wamazwe omhlaba ngezinhloso zentela, qiniseka ukuthi awukhulumi nje nanoma iyiphi i-CPA. Khuluma ne-accountant kanye / noma ummeli wentela ogxile ekusizeni izakhamizi nezakhamizi ngemali engenayo yangaphandle. Unamathuba amaningi okuthi uphase ukuhlolwa kwamabhuku ngemibala endizayo. Futhi, uzolala kangcono ebusuku, futhi.
Ukufakwa Kwenkampani Yase-Inthanethi
Isu elilodwa eliphumelelayo elingcono kakhulu ukusebenzisa inkampani yasolwandle ukuze usebenze ibhizinisi lakho le-intanethi. Kuyindlela futhi esebenzisa i-Apple ne-Google. Uma ibhizinisi lakho lisuselwa ku-intanethi futhi ufaka inkampani yakho yamazwe ngamazwe ngendlela efanele, ngakho-ke, kungenzeka ukuthi inenzuzo ekhethekile kakhulu yentela. Lokhu kungase kubekwe ukukhokha intela, okufana ne-IRA, isibonelo. Kubaluleke kakhulu ukuba uthole iseluleko sentela se-CPA onolwazi ongakuqondisa ekusebenziseni leli qhinga. Ukusetshenziswa kwale mathuluzi ukulondoloza imali intela kungase futhi kuxhomeke ezweni lakho lokuhlala kanye nesakhamuzi kanye nephesenti yobunikazi benkampani, phakathi kwabanye abalingisi. Ngakho-ke, kufanele isetshenziswe kuphela ngaphansi kokuqondiswa kwezezimali zentela.
Ibhizinisi eliku-intanethi lingaba nesisekelo samakhasimende womhlaba jikelele. Isibonelo, ufuna ukuwandisa isisekelo sekhasimende lakho ngezikhathi ze-22? Isibalo esingaphandle kwe-US siphezulu ngamahora angu-22 amakhulu kunaphakathi. Inani labantu abangaphandle kwe-UK liyizikhathi ezingu-109 ezinkulu kunaphakathi, i-200 enkulu ngaphandle kwe-Canada nezikhathi ze-304 ngaphandle kwe-Australia. Uthola umqondo. Kungani kufanele ulinganisele embonini yebhizinisi elidala lendawo? Ngenxa yalokho, ukusungula inkampani yase-offshore kanye ne-akhawunti yasebhange ye-offshore ukuqhuba ibhizinisi lakho le-intanethi kungaba yindlela enhle yokwakha umfutho ngaphandle kwezwe ohlala kulo.
Kungakapheli imizuzu yokufaka icala, ummeli angakwazi ukufaka enye idokhumenti ekhubaza i-akhawunti yakho yasebhange, ikhaya lakho, ibhizinisi lakho namanye amafa. Noma kunjalo, ukusebenza kwebhizinisi elisolwandle kubeka umkhawulo omkhulu kumkhwenyana we-viscous of the dispant to froze futhi uthathe izinsiza zakho ezibunjiwe kanzima.
Amathanga amaningi weNgeniso
Kuthiwani uma inkampani yangakini isebenza ezikhathini ezinzima? Khumbula ukwehlukana kwe-US neYurophu kwe-2008, i-2009 neminyaka elandelayo? Phakathi naleso sikhathi umnotho oseningizimu-mpumalanga ye-Asia ne-Australia wawukhula. Ngokusebenzisa umshini wemali ye-offshore, unciphisa ukuvezwa kwakho emnothweni wendawo.
Kungani ungabi namabhizinisi amaningi online online asebenza ngasikhathi sinye?
Izindleko eziphansi zokusungula inqwaba yezinkampani nama-akhawuntini aphesheya kwezilwandle, kanye nezinsizakalo ezintsha zokuthuthukisa iwebhusayithi eziphansi kakhulu zenza ukutshala imali kokuqala kube nje ukwehla ebhakedeni uma kuqhathaniswa namandla amakhulu asebusweni. Inhlangano yethu inikeza zonke lezi zinsizakalo, futhi in amashumi ezinkulungwane amaklayenti. Uma umlimi efuna ukuvuna isivuno kufanele aqale atshale imbewu. Akuyona yonke imbewu ekhula kodwa iningi lazo liyakhula; futhi lokho okwenzayo kungamenza yena nomndeni wakhe ukuba baphile izizukulwane eziningi.
Le nkampani iqale ku-1906. Sithanda kakhulu izinsizakalo zezezimali zasemaphandleni kanye nokuvikelwa kwempahla ezivela ezinkantolo. Inkampani yethu ibambe iqhaza emthethweni eNevvis, Cook Islands naseDominica. Izimiso zenkampani yethu yokuxoxisana nenkampani njalo nezinhloko zombuso ukuthonya umthetho ngendlela enhle kakhulu kumakhasimende ethu.
Inkampani yase-Offshore ifake isandla emithethweni eNevis, e-Cook Islands, eDominica naseCongo. Sihlangana njalo nezinhloko zombuso ukwenza ngcono uhlaka lwazo lokulawula.
Umphathi wethu omkhulu weVance Amory, uNdunankulu waseNevis (1992 - 2006 kanye 2013 - 2017)
I-CEO yethu Ne Roosevelt Skerrit, uNdunankulu waseDominica
Umphathi Omkhulu Wethu noClément Mouamba, uNdunankulu waseRiphabhlikhi yaseCongo (Brazzaville) kanye noMmeli Wethu uYonathan Amselem
Umphathi wethu omkhulu noMark Brantley, uNdunankulu waseNevis (2017-Present)
Kugcine ukubuyekezwa ngoNovemba 26, 2020
Ngisanda kuqedela amafomu e-intanethi futhi amadokhumenti ami abhalwa ngumchwepheshe onokubonisana mahhala.
Ufuna ukusho ukuthi ngihlatshwe umxhwele ngokuphelele yikhwalithi yesevisi. Okungajwayelekile !!! Sithole imibhalo yenkampani kanye ne-EIN kanye nencwadi yokugunyazwa evela ehhovisi likaMbusi namhlanje ekuseni. Ayikwazanga ukujabula kakhulu. Ngizokwazisa wonke umuntu ukuthi ungowayiphi inkampani enkulu. Ngiyabonga, uRon noRoxy A.
- URon noRoxy A.
Ngisebenzisa amathuluzi ebhizinisi lenkampani yasolwandle, ngilondoloze imali yami yebhizinisi kanye nempahla yomuntu siqu kusuka enkantolo engaba yingozi.